မြန်မာ့သဲ စင်္ကာပူ ပြန်လည် စုပ်ယူနေ — မြန်မာဌာန
မြန်မာ့သဲ စင်္ကာပူ ပြန်လည် စုပ်ယူနေ
မြန်မာ့ရေပိုင်နက်အတွင်း ဆလုံကျွန်း အရှေ့ဘက်၊ သူဌေးကျွန်း အနောက်ဘက်၊ ခရုကျွန်း အရှေ့ဘက်နဲ့ သိရိမြိုင် အရှေ့ရပ်ကွက်တွေမှာ စင်္ကာပူ သဲစုပ်သင်္ဘောတွေ ပြန်ရောက်လာပြီး သဲတွေ တိတ်တဆိတ် စုပ်ယူနေကြောင်း သိရပါတယ်။
စင်္ကာပူ သဲတူးသင်္ဘောတွေဟာ သဲတွေ အဆမတန် စုပ်ယူခဲ့တဲ့ အတွက် ကော့သောင်းမြို့နယ်တဝိုက် ကမ်းပါးတွေပြို သဲသောင်တွေ နည်းပါးလာတာကြောင့် ကော့သောင်းမြို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်တားဆီးရေး ကွန်ရက်အဖွဲ့က ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေထံ စာရေးသား ပေးပို့ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် သဲတူးသင်္ဘော ကုမ္ပဏီတွေ ၂ လနီးပါး သဲစုပ် ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နိုဝင်ဘာ လကုန်ပိုင်းက စပြီး စင်္ကာပူ သဲတူးသင်္ဘောတွေ ပြန်ရောက်လာပြီး အခုလို သဲတွေ တိတ်တဆိတ် စုပ်ယူနေတာပါ။
ဒီအကြောင်း အာအက်ဖ်အေ သတင်းထောက် မရွှေစင်က သတင်း ပေးပို့ထားပါတယ်။
စကၤာပူနဲ႔မေလးက တရုတ္ေတြ ပိုက္ဆံေပးရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ဘာမဆို လုပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာတုန္းက ဒီလူ႔မ်က္နာလက္သီးနဲ႔ထိုးခ်င္တာ လက္စသတ္ေတာ့ တကယ္ဘဲလုပ္ႏိုင္ၾကတာကိုး အျပစ္မရွိတဲ့လူက်ေတာ့ သတ္ျဖတ္တဲ့ေရတပ္ ဘာလုပ္ေနလဲ ဒါက တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးလာၿပီ တရုတ္ေတြေျပာသလို လာဘ္စားၿပီး မ်က္လံုးမွိတ္ထားတာလား
Go and stop them, immediately .
Hello ...Hello........Responsible government departmental personnel.....go and stop them and take ACTION.
ကိုယ္မာခ်င္တဲ့ငေတ ေတြမ်ားေနတုံးပါဘဲ ဒါေၾကာင့္ဒီမိုကေရစီ
လိုခ်င္တာပါ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာေတာ့ ဘယ္သူမွဥပေဒအထက္
မွာမရွိၾကပါဘူး ဥပေဒစိုဒမိုးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လူတိုင္းပြင့္လင္း
လြတ္လပ္စြာ ေျပာနိဳင္ေျပာရဲၾကတာေပါ့ လူတိုင္းလဲသိက္ခါရွိရွိေနနိုင္
တာေပါ့ ခုေတာ့ နိဳင္ငံနဲ႕ပါတ္၀န္းက်င္ ေဘးမၾကည့္ပဲလုပ္ေနလိုက္
What is your Navy doing? Suppose to protect your soverign and territories, isn't it? Or they are accompanies/partner? Just know how to bully own citizens. Cowards.
Bull shit singapoean.. Go back your islands...